China AH slurry mgbapụta roba impeller factory na suppliers | YAAO
Slurry pump impeller nwere ike rụọ ọrụ dị oke mkpa na ọrụ nke mgbapụta slurry. Site n'usoro, ọ nwere ike inyere slurry mgbapụta izute mkpa nke akụrụngwa. Ihe eji agbapụta slurry impeller dị mfe, n'ihi ya, anyị na-achọ ihe ndị pụrụ iche iji gbatịkwuo ndụ nke impeller.
A na-eji ndị na-agbapụta ihe ndị na-agbapụta rọba na-emeso ndị na-eri ihe na-adịghị ọcha. A na-eji rọba emebe, roba roba, EPDM Rubber, Nitrile Rubber, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ.
Anyị ji nganga rụpụta mma roba slurry mgbapụta impellers na ndị ọzọ na-anọchi akụkụ maka ụfọdụ ma ama mgbapụta rụpụta, nke bụ 100% tụgharịa
INTERCHANGEABLE, ọ dịghị mkpa ịgbanwe ngwaahịa gị.
Akwa mma, akụkụ mgbapụta na-adịgide adịgide na oge nnyefe ngwa ngwa bụ ọkwa anyị. Anyị na-eji ihe eji eme ihe nwere njiri mara nka na nkọwapụta teknụzụ iji hụ na nkwụsi ike kachasị na ogologo ndụ na ngwa kachasị achọ.
* URU Ọ BARA
* Ogo arụpụtara ihe
* Extended wear ndụ ka ukwuu bara uru
* Udo nke mmezi
* Ọnụ ego mpi
* Oge nnyefe ngwa ngwa
* Teknụzụ ndị edenyere aha ha
* Ngwa ngwa mgbanwe
* Unique ngwaahịa ngwọta
* Nnweta zuru ụwa ọnụ na nka
* YAAO® Rubber Materials Type Na Data Nkọwa
Koodu YAAO Ihe onwunwe aha .Dị Nkọwa
Ihe na-emegide ahụ
Eke Rubber YR26 bụ nwa ojii, rọrọ eke roba. Ọ nwere oke mbuze na-eguzogide ihe ndị ọzọ niile na ngwa ngwa slurry dị mma. A na-eme ka antioxidants na antidegradents eji mee ihe na RU26 ka mma iji meziwanye ndụ nchekwa ma belata mbibi n'oge eji. A na-enye nguzogide mbuze nke RU26 site na njikọta nke nnwere onwe ya dị elu, ike mgbatị dị elu na ịdị ike Shore dị ala.
Eke Rubber YR33 bụ ihe eji adịchaghị mma na-acha uhie uhie nke adịghị ike ma jiri ya mee ihe ikuku mmiri na mgbapụta mgbapụta na ndị na-akụpụta ihe ebe ikike ya dị elu na-enye mmụba ịkpụ na ike siri ike.
Eke Rubber YR55 bụ nwa, Anti-corrosive eke roba. Ọ nwere oke mbuze na-eguzogide ihe ndị ọzọ niile na ngwa ngwa slurry dị mma.
YS01 EPDM Rubber Sịntetik Elastomer
YS12 Nitrile Rubber Sịntetik Elastomer Elastomer YS12 bụ roba sịntetik nke a na-ejikarị na ngwa metụtara abụba, mmanụ na waxes. S12 nwere oke mbuze mbuze.
Sịntetik Elastomer YS31 bụ elastomer na-ekpo ọkụ na ikpo ọkụ. Ọ nwere ezigbo nguzozi nke nguzogide kemịkalụ na acid na hydrocarbons.
YS42 Polychloroprene (Neoprene) Sịntetik Elastomer Polychloroprene (Neoprene) bụ nnukwu elastomer sịntetik nwere ike dị elu yana obere ike dị ala karịa roba nkịtị. Obere okpomọkụ ka arụ dị karịa roba nkịtị, ma nwee ihu igwe dị mma yana nguzogide ozone. Ọ na-egosipụtakwa nguzogide mmanụ dị mma.
* Akwụkwọ a bụ ihe onwunwe nke YAAO® Pump ma enweghị ike imegharị ma ọ bụ gosi ya na ndị ọzọ na-enweghị
Nke gara aga: Slurry mgbapụta Expeller Ring
Osote: YCVX-Hydrocyclone mkpuchi